Google Panda Algorithm Gadziriso
Muvhuro, March 7, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ini ndine yakasanganiswa manzwiro paGoogle ndichiita akakosha shanduko kune yayo algorithm. Kune rimwe divi, ndinotenda chokwadi chekuti vari kuyedza kugadzirisa… sezvo ini ndisinga gutsikane nezvakatsvagwa neGoogle. Pakutanga nhasi ndanga ndichitsvaga mamwe manhamba eku blogga ... uye mhedzisiro yacho yaityisa:
Kana iwe ukatarisa mhedzisiro ... uye woenda kubva peji kuenda kune peji, zvinoita sekunge Google iri kubhadhara kushoma kutarisisa kune akakura masayiti uye zvakanyanya kutarisisa kune madiki masayiti. Dambudziko nderekuti mhedzisiro yandinotsvaga yakanyatsopesana. Vamwe vangati Google haigone kunzwisisa chinangwa changu… hachisi chokwadi. Google ine nhoroondo yemakore pamatanho angu ekutsvaga. Iyo nhoroondo yaizopa yekuisa mumisoro yandinofarira kutevera.
Iyo yazvino Google yekuvandudza, neimwe nzira inozivikanwa seiyo Panda gadziriso (yakatumidzwa mushure mekuvandudza), yaifanirwa kusimudzira mhando. Dambudziko, sekutsanangurwa kwevazhinji SEO vanhu, nderekuti vaive vaine nguva yakaoma yekukwikwidzana nayo zvinyorwa farms. Mukutendeseka kose, ini handina kunyatsoona yakawanda yekunyunyuta kubva kune vashandisi… asi Google yakaratidza kunge yakawira pasi pekumanikidzwa kweindasitiri.
Kana zvidiki zvemukati masosi zvakatadza kukwikwidza nenzvimbo hombe, ndinonyatsonzwisisa. Chero chipi zvacho chinokanganisa demokrasi yewebhu chinofanira kugadziriswa. Handitende kuti Google yakanyatsogadzirisa dambudziko, zvakadaro. Zvinoita sekunge kwandiri ivo vakangoita shanduko yekumashure… vachivhara rimwe gomba pakatanga kubuda kwakawanda. Shanduko yealgorithm yakavandudza kukanganisa kukuru - nzvimbo hombe dzine huwandu hukuru hwemapeji epamusoro senge anowanikwa kuverengerwa nyore pamapeji matsva.
Chinyorwa chinotevera, chokwadika, ikozvino masosi akakura ayo ane huwandu hwakawanda hwemapeji ekumisikidza… asi chikamu chidiki chemapeji ane mutsindo, izvozvi chakadonhedza chinzvimbo kubhodhi. Fungidzira kudyara saiti uye kuvaka zviuru zvemapeji ezvakakura zvemukati, chete kuti uwane kuti husiku hwepamusoro saiti yako yakadonhedzwa nekuti une mamwe mapeji anotambura. Kudonhedza kunoguma kuri kutodhurira mamwe makambani zvakanyanya.
Iri blog rine pamusoro pe2,500 blog zvinyorwa. Zvirokwazvo havazi vese vari vekirasi "A" zvinhu. Ichokwadi, kukura kweiyi blog hakuenzane nemapurazi mazhinji ezvinyorwa ane mazana ezviuru kana mamirioni emapeji. Zvisinei, ndichiri kurima… Kuyedza kuvaka chinzvimbo chemisoro yenyaya dzakasiyana dzinoenderana nekutsvaga, zvemagariro, nhare uye zvimwe zvekushambadzira. Handina chokwadi chekuti ndinogadzira zvakadii ndisati ndaonekwa sepurazi remukati… ndokurangwa zvinoenderana… asi ini handina kunyatsofara nezvazvo.
Zvakavanzika zvekare kuSEO zvaive zvisina kuvanzika. Nyora zvirimo zvirimo, shandisa mazwi akakosha zvinobudirira, gadzira mapeji ako nemazvo, gadzira yako saiti kuti ushandise izvo zvemukati ... uye kusimudzira kuburitsa mairi. Inoshanda kiyi yekushandisa uye kuiswa kwaizokutora iwe mumhedzisiro mhedzisiro… uye kusimudzira kweizvozvo zvemukati kure-saiti kwaizowana iwe chinzvimbo chiri nani. Chakavanzika chitsva hachinyatso kuzivikanwa. Avo vedu vari muindasitiri vachiri kungwarira kuti tinzwisise izvo zvinongoda kuitwa. Google yakanyarara pairi, zvakare, saka tiri pedu tega.
Chokwadi chinotaurirwa, ndakasuwa kuti Google yaizofunga iri zano rakanaka kukanganisa 12% yeese mitsva yekutsvaga usiku hwese. Pane vakawirwa nenyonganiso iyi - vamwe vavo vanoshanda nesimba vanachipangamazano vari kutsvaga vatengi vavo kuti vavape rairo dzakanakisa. Google yakatoita backpedal uye kudzoreredza shanduko.
Google ine hukasha yakatanga iyo SEO indasitiri uye kunyangwe inosimudzira optimization kuyedza kusimudzira mhando yemhedzisiro yavo. Hatina kutamba mutambo uyu, sa CNN inoratidza… Tese takadzidza, tikapindura nekuteerera kurairo yapihwa. Takashanda nesimba kuita zvaikurudzirwa neGoogle Abvunzwa isu ku. Isu takabhadhara uye takapinda zviitiko zvaifarirwa nevanhu Matt Kucheka ramba uchisimudzira. Isu takashanda nevatengi vakuru uye takavabatsira kuti vawedzere zvizere zvemukati mavo… chete ikozvino kuti kapeti ibudiswe pasi pedu. Google inonongedza kunzvimbo senge Wikipedia se unhu saiti… asi yakaranga nzvimbo dzakatengwa zvirimo uye vanhu vakanyoreswa kunyora. Enda uone.
Google akaita inoda kuchinja. Zvisinei, hunhu hwakanyanya hwekuchinja uye kushayikwa kweyevero pachikamu cheGoogle zvaive zvisina basa. Nei Google isingakwanise kungoyambira vaparidzi vakuru kuti paive nealgorithm yaive ichizadzikiswa mumazuva makumi matatu iyo yakapa mubayiro vaparidzi vakuru nekuvandudza mapeji avo mune zvakadzama uye mhando? Nei usingatarise shanduko uchishandisa yakakosha yekutsvaga kana sandbox nharaunda? Zvisingapfuure makambani vangadai vakagadzirira kudonha kukuru kwetraffic, kusiyanisa kwavo kwekushambadzira pamhepo zvakanyanya, uye kuita zvimwe (zvakanyanya kudikanwa) kugadzirisa.
Mumwe muenzaniso chaiwo mutengi wandiri kushanda naye. Isu tanga tichitovaka kunze kuri nani email, nharembozha uye kusangana - uye nerevhuru loop apo vaverengi vanogona kuratidza mhando yezvirimo zvavaiverenga kuti zvigadziriswe. Dai isu taiziva kuti kwaizove nealgorithm yekuvandudza iyo yaizodonhedza makumi mana muzana yenzvimbo saiti, isu tingadai takashanda nesimba kuti marongero iwayo ararame pane kuenderera tweak saiti. Iye zvino tiri kutambura batana.
Maitiro Ekuwana Unganidzo Muto kubva kuYouTube
Mar 8, 2011 pa 3: 36 AM
Hapana imwe yemasaiti angu yakakuvadzwa mune yekuvandudza kweMurimi. Hapana kana wevamwe vatengi vangu futi. Ini ndinotenda izvi imhaka yekuti mhando yezviri mukati yakakosha, asi hunhu uye mvumo yekubatanidza kune izvo zvemukati zvichiri kutonga zuva. Izvo zvakakoshawo kupfuura nakare kose kuti vaviri vanowirirana sei zvakananga.
Ndiratidze saiti yakarovera pasi, ini uye ndichakuratidza maburi muiyo link profile kana ichienzaniswa nevamwe mune iyo niche yakawana. Zvinoitika saizvozvi nezvose zvinogadziridzwa, zvisinei kuti rakapihwa zita ripi. "Mahombe" masayiti haana kureva kurasikirwa… kungoita masimba masayiti asina kuvandudza kumira kwawo. "Makuru" masayiti anotorwa zvakatsva zvakare, uye izvozvo hazvibatsire.
Uye zvakare, ini ndinotenda algo zviratidzo zvehunhu zvemukati zvakakwidziridzwa uye vari kutsvaga zvinopfuura zvinopfuura "zvakanaka uye zvepakutanga" mazwi. Pane zvinhu zvinoverengeka zvinosanganisira mutauro unogamuchirwa weiyo niche, AP Stylebook kufunga, chikuva (blog kana static semuenzaniso) uye kuverenga kuverenga.
Nzvimbo dzepamusoro dzakarohwa (ezinearticles, mahalo) dzakakuvadzwa nechirango chemanyorerwo. Ivo vakaitwa mienzaniso nechinangwa chekusimudzira iyo buzz. Izvi zvakaongororwa nevanhu uye vanhu vakarerekera… ndosaka dzimwe nzvimbo "dzakanaka" dzakaita seCult yeMac dzakaroverwawo… Ndinofunga vanhu veMac vanozvitutumadza uye vanozvikudza uye ndairova saiti nezveMac futi. LOL j / k
Mar 8, 2011 pa 9: 59 PM
Apr 13, 2011 pa 8: 40 AM
Ohh Yesss .. Google "Panda" Algorithm Shanduko .. http://www.hayatoglunakliyat.com
Sep 5, 2011 pa 6: 24 AM